DHAMMA GARDEN CENTRE: ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ နောက်ဆက်တွဲ (ခ)
ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ နောက်ဆက်တွဲ (ခ)
ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Dhammagarden တစ်လုံးမျှ မရေးသေးပါ။
cbox မှာ တွေ့တာကို တင်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
Dhammagarden ကိုယ်တိုင်ဘာမှကို မရေးသေးပါ။
အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် Dhammagarden ရေးသားချက်း လုံးဝမပါပါ။
အကူအညီရမလားလို့ လင့်ကူးပြီး တင်ခါမှ ပြဿနာနဲ့တိုးနေတယ်။
ဒီအတွက် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့သူအားလုံး တောင်းပန်ပါတယ်။
သာသနာရေး အဖွဲ့စည်းသို့ မေတ္တာရပ်ခံချက် စေတနာပိုစ်အတွက် ( ရှင်းလင်းဖြေကြားချက်)
ဒီနေ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကြားမိတယ် ရင်ထဲမှာမကောင်းဘူး။ ဘယ်သူတွေကူညီနိုင်မှာလဲ သာသနာ့အဖွဲ့စည်းကရော ဘာတွေအကြံပေးနိုင်မှာလဲ။ UN ဆိုတဲ့အဖွဲ့စည်းကရော ဒီလူတွေကိုဘယ်လို ကူညီနိုင်မလဲ။ ကျွန်မတော့ ဘာမှမသိဘူး စိတ်ထဲရှိတာပြောကြည့်တာနော်။
ဖြစ်ပုံကဒီလို ထိုင်းနိုင်ငံ ဝတစ်လုံးဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းတွင် လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ ကျောင်းသားပြသနာတက်ခဲ့ရာ ကျောင်းသားမှဘုန်းကြီး၏ ဦးခေါင်းကိုရိုက်နက်တဲ့ အထိပြသနာတက်ခဲ့တယ်။ ပြသနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ကျွန်မသေချာမမေးမိပါ။ အဲဒီဘုန်းကြီးနဲ့ ကျောင်းသားပြသနာကြောင့် မနေ့ညတွင် ဝတစ်လုံးကျောင်းသို့ ထိုင်းရဲမှဝင်ရောက်ဖမ်းဆီး ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးမှ မကျေနပ်သောကြောင့် ထိုင်းရဲကိုတိုင်ကြားခြင်း ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲလိုထိုင်းရဲများ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရာတွင် မြန်မာဘုန်းကြီး ဧည်သည်များပါ အဖမ်းခံရပြီး ရဲများကလူဝတ်လဲလိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စုစုပေါင်းဘုန်းကြီး (၁၀)ပါး အဖမ်းခံထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဖမ်းခံရသော ဘုန်းကြီးများထဲတွင် မြန်မာပြည်မှ ဧည်သည်ဘုန်းကြီးများ (UN) လျှောက်ထားပြီး ကန့်ထဲတွင်နေသော ဘုန်းကြီးများပါ ပါသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ မြန်မာသသနာရေးဆိုင်ရာများကရော သင်္ကန်းချွတ်လူဝတ်လဲခံရတဲ့ ဒုက္ခသည်ဘုန်းကြီးတွေ ကိုဘယ်လိုများ ထောက်ခံကူညီပေးနိုင်မှာလဲ။ ထိုင်းရဲကဖမ်းတာ ဖမ်းလို့ရပါတယ်။ ဧည်သည်တွေ ဘုန်းကြီးတွေမှာ ပတ်စပို့မရှိလို့ဆိုပြီး တာဝန်အရဖမ်းပေမဲ့ သင်္ကန်းချွတ်လူဝတ်လဲ တာကတော့ ကြားမကောင်းပါဘူး။ အဲဒီလူဝတ်လဲ အချုပ်ချ/ထောင်ချမယ်ဆိုတော့ သာသနာရေးအဖွဲ့စည်း ကလည်းမျက်စိမှိတ်ပြီး မနေဘဲတတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကိုယ့်သာသနာအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကြိုးစားပေးပါလို့ အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား ကျွန်မ (အလွမ်းမြို့လေး)မှမေတ္တာရပ်ခံ တောင်းခံအပ်ပါတယ်။
မျှော်လင့်တစ်ချက် တစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘဲ လူမှု့စာနာမှုနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံတောင်းခံအပ်ပါတယ်။
အထက်တွင်တင်ထားသော ပိုစ်အတွက် ရှင်းလင်းချက်။ ဒီသတင်းကို လုပ်ကြံရေးခြင်း မဟုတ်ပါ။ ရန်ဖြစ်ပြီးသောရက်တွင် ဝပ်တစ်လုံးကျောင်းမှ သင်္ကန်းဝတ် ကိုယ်တော်တစ်ပါး၏ နှုတ်မှပြောကြားသော စကားလုံးတိုင်းကို စေတနာစိတ်ဖြင့်သာ ရေးချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂါတစ်ယောက် မဟုတ်သလို သတင်းလိုက်နေသော မီဒီယာသမားလည်း မဟုတ်ပါ။ သို့သော် သူများနိုင်ငံမှာ ဘုန်းကြီးတွေ ဒုက္ခရောက်သည်ဆိုသည့် အသိစိတ်နဲ့စေတနာထားမိပြီး ဝပ်တစ်လုံးကျောင်းမှ သင်္ကန်းဝတ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါး ပြောလာသော စကားလုံးတိုင်းကို ရေးချကူညီရခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ကျွန်မရေးထားသော ပိုစ်မှစကားလုံးတိုင်းအတွက် ကျွန်မသတ္တိရှိရှိ တာဝန်ယူရဲပါသည်။ ကျွန်မ၏ပို့စ်တွင် တင်ထားသော ရိုက်သူကျောင်းသားမှာ( ရခိုင် )ဆိုတာကို မှားသည်ဟု လာရောက်ဆက်သွယ်ပြောကြား ကျောင်းတက်နေသည့် ကိုယ်တော်တစ်ပါးကြောင့် ကျွန်မ (၂၀) ရက်နေ့ညတွင်ချက်ချင်း ပိုစ်ပြန်ပြင်ထားပါတယ်။ အမှားအတွက်လာရောက် ပြောကြားပြီး သတင်းပြောကြားသော ကိုယ်တော်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိသလို ကျွန်မကိုယ်တိုင် ဖုန်းဆက်ပြီး ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသတင်းပေးသော ကိုယ်တော်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲဒီအတွက် မနေ့ညသတင်းပေးသော ဝပ်တစ်လုံးကျောင်းမှ ကိုယ်တော်ကိုသေချာ ပြန်မေးပါတယ်။ သူပေးတဲ့သတင်းမှားလျှင် ကျွန်မပိုစ်တင် တောင်းပန်ရန်အတွက်ပါ။ သို့သော် သူကထပ်ပြီးသေချာအောင် (ရန်ဖြစ်ကြတယ်။ အရိုက်ခံရတာ မွန်ဘုန်းကြီး။ ရိုက်သူ ရခိုင်)လို့ ထပ်မံဆိုလာပါတယ်။သို့သော် ဧရာဝတီရေးသော ပို့စ်မှာလူမျိုးရေး နာမည်သာမပါတာ။ ပိုစ်အရင်းအမြစ် တစ်ပုဒ်လုံးမှားနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုန်းကြီးလောကကို ကျွန်မမသိတဲ့ အတွက် လူမျိုးနာမည် ကျွန်မပိုစ်တွင် ကျွန်မအကုန်ဖျက် ပေးထားပါတယ်။သို့သော် http://www.dhammagarden.com/
တွင်ဆက်လက်တင်ထားသော ပိုစ်အတွက် ကျွန်မတာဝန်ယူ ဖြေရှင်းမည် မဟုတ်ပါ။ ကူးယူတင်ထားသော http://www.dhammagarden.com/ PHD ဘွဲ့ရဘုန်းကြီးသာ တာဝန်ယူဖြေရှင်းရမည်။
ဒီအောက်တွင် ကျွန်မဆီမေလ်းဖြင့် လာရောက်ပြောဆို ရှင်းလင်းထားသော ကိုယ်တော်နဲ့ပြောထားသော အချက်အလက်များ ဖတ်ပြီးဝေဖန် သုံးသပ်ပေးကြပါ။ စာဖတ်သူများ အမှားအမှန်ကို သေချာ သိနိုင်သလို မှားခဲ့တယ်ဆို ကျွန်မလိုချက်ချင်း ပြင်နိုင်တဲ့ သတ္တိရှိနိုင်ကြ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ လူမျိုးရေးမိသော စေတနာအမှားနှင့် ပိုစ်တစ်ပုဒ်လုံးမှား ရေးထားသော လွှဲချော်မှုအမှားကို အဘယ်ကြောင့် ကွဲပြားသည်ကို သင်ဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါစေ။
10:21 AM me: ရေးထားသော စာလုံးတိုင်းကိုလည်း တာဝန်ယူရဲတဲ့ သတ္တိရှိပါတယ်
သတင်းကတော့ တစခုခု မှားနေတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်
10:23 AM ဧရာဝတီက တကယ်ငွေကြေးရတဲ့ သတင်းဆိုက်လေ. ဘာလို့ ရိုက်ပွဲလို့ မရေးဘဲ ဆွမ်းခံတာတွေ လျှောက်ရေးတာလဲ။ တပည့်တော်မက ကိုယ့်မြန်မာ သံဃာတွေကို သူများနိုင်ငံမှာ ဒုက္ခရောက် သိက္ခာကျမှာစိုးတဲ့ စေတနာနဲ့ဘဲမလို့ ပိုစ်တင်မိတာ. (လူမျိုး) နာမည်ဘဲမှားတယ်.။ သူတို့ ကျတော့ ဘာလို့ သတင်းတစ်ပုဒ်လုံးမှားတာလဲမသိ
ဦးဇင်း ဘယ်လို နားလည်လဲ
10:24 AM ရိုင်းတယ်ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်ပါ
ညကတော့ ဝပ်တစ်လုံးကျောင်းက ကိုယ်တော်ကို ဖုန်းဆက်ပြီးပြီ။ ဦးဇင်းနဲ့ ချက်ပြီးတာနဲ့. ဟုတ်ပါတယ်. အရိုက်ခံရတာ မွန် ဘုန်းကြီးဆိုတာ မှန်ပါတယ်
10:25 AM သို့သော် ရိုက်သွားတာက ရခိုင်ကျောင်းသားလို့ သေချာ ထပ်ပြော သွားပါတယ်
ashin အဲဒါ အရိုက်ခံရတဲ့ ဘုန်းကြီးကပြောတာလား
10:26 AM me: သို့သော် သံဃာ့အမှုတွဲတွေထဲ နားမလည် မပါချင်လို့ တပည့်တော်မ နာမည်တွေ ပြင်ပေးပါတယ်
10:27 AM ပြီးသွားတာက ပြီး သွားပါပြီ။ သို့သော် ဦးဇင်းကို သိစေချင်တာက တပည့်တော်မက ငွေမီဒီယာသမားလည်း မဟုတ် ဘာမှ မသိ ဘာမှမတတ်တဲ့ စေတနာ လူတစ်ယောက်ပါ
ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ် ဦးဇင်း
ခုလို ပြန်လည် ရှင်းပြခွင့်ရတာ
10:28 AM ashin တကာမမေးလို့ပြန်ဖြေတာ
ဒီကျောင်းမာ နေတဲ့ လူမျိုးစုံ မြန်မာနိုင်ငံက ရှိတယ်
10:29 AM ဘယ်သူ ဘယ်လူမျိုးဆိုတာ
ဘာလို့ မဟုတ်တာတွေ လုပ်ကြံပြောချင်ကြတာလည်း
me: မပြောတတ်ပါ ဘုရား
တပည့်တော်မကတော့ကို အဲဒီက ကိုယ်တော်တွေ ပြောတာပါ
10:30 AM ashinp အဲဒီကိုယ်တော်တွေက မဟုတ်တာတွေဖန်တီးနေတာ
me: တပည့်တော်မှ ပိုစ်က( နာမည်)မှားမှုအတွက် တပည့်တော်မ ပြန်လည်တောင်းပန်ပါတယ်။. သို့သော် ပိုစ်တစ်ပုဒ်လုံး မှားတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကျေနပ်ပါတယ် ဘုရား
10:31 AM ပြောယင် ရခိုင်တွေရိုင်းတယ် မကောင်းဘူးတဲ့
အဲဒီအတွက် သူတို့ပေးလာတဲ့ သတင်းအတိုင်းဘဲ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ashin လူရှေ့မှာတော့ မာယာတခွဲသာနဲ့ စကားချိုချိုနဲ့
10:32 AM ရိုက်သောသူမှာ ဗမာလူမျှိုး ရန်ကုန် ရွှေပါက်ကံ့ သား ဒီလူကိုလက်ခံထားသူမှာ ဦးစန္ဒာသီရ ကော့မှု့သားဖြစ်ပါသည်
အရိုက်ခံသော ရဟန်းမှာ ဦးအဂ္ဂ မွန်းလေးဖြစ်ပါသည်
10:33 AM me: ကျေးဇူးပါ
ashin ဒီနေ့တောင် ဗမာဦးဇင်းတွေနှင့်တက္ကသိုလ်မာ ထပ်စုံစမ်းဖြစ်သေးတယ်
10:34 AM ဘာလို့မဟုတ်တာတွေလုပ်ကြံနေကြတာလည်း နားမလည်နီုင်ပါဘူး
me: ဘုန်းကြီးတွေနဲ့လည်း အဆက်အသွယ်မရှိ။။သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကြောင့် တပည့်တော်မမေလ်းထဲ မေလ်းထဲလာပို့ထားလို့ မနေ့ည ချက်ချင်း ဖုန်းထပ်ဆက်တယ်။. ကိုယ့်ပိုစ်မှားတယ်ဆို ပိုစ်တင်တောင်းပန်မလို သေချာအောင် ပြန်မေးလိုက်တာပါ
ဦးဇင်း အသိတွေကို နားလည်အောင် ပြောပြပေးပါ
10:35 AM တပည့်တော်မကတော့ ပိုစ်ကို ပြောင်းပေးလိုက်ပြီး။ တပည့်တော်မ ပိုစ်ကို ကူးယူတင်လိုက်တဲ့ ဘလော့တော့ ပြောင်းမပြောင်း မသိ။
အဲတာ တပည့်တော်မနဲ့ မဆိုင်
ashin ဟုတ်ပါတယ် သူတို့တစုက အဲသတင်းဆိုက်တွေသွားပီး လုပ်ကြံဖန်တီးဖြန့်နေတာ
10:36 AM တကာမဘက်နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်
10:37 AM ashin ဓမ္မဂါးဒင်းဆိုတဲ့ဆိုက်ကလည်း မနေ့က သေချာ စုံးစမ်းဖို့ ဖြစ်တာလည်း သေချာပြောထားတာ ဒီနေ့သတင်းနောက်တခုထပ်တင်လာသေးတယ်
10:38 AM ဟိုဘက်ဘုန်းကြီးလုပ်ထားတဲ့ဆိုက် လူထက်ကို အသိဥာဏ်တုးန်းနေပါလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်
me: သံဃာအချင်းချင်း လူအချင်းချင်း လူမျိုးအချင်းချင်း စည်းရုံးချစ်ခင်မှ ပြည်မာပြည်ကြီး ပိုတိုးတက်အောင်မြင်လာမှာပါ။အဲလို ဖြစ်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။
10:39 AM အဲဒီမာပါ
me: တပည့်တော်မလည်း ဦးဇင်းနဲ့ ချက်ပြီးချက်ချင်း ဖုန်းပြန်ဆက်တာပါ. သတင်းမှားဆို ပြန်တောင်းပန်မလို့ပါ ဘုရား
10:40 AM ဖတ်ပြီးပါပြီ ဘုရား
ashin အကုန်လုံးစ ဆုံး ရှင်းရှင်းကြီးပဲသိနေတာ အဲဒါကိုလုပ်ကြံဖန်တီးနေတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ဓါတ်ကတော့ နိုင်းယှဉ်စရာကို မမြင်တော့ပါဘူး
10:41 AM ဒီကသူတွေပဲ လုပ်ကြံနေကြတာပါ
10:43 AM me: အဲဒီကိုယ်တော် တင်ချင်သလို တင်ပါ။ လွတ်လပ်သော သူတို့ရဲ့စိတ်ကို တပည့်တော်မ တားမြစ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။အမှန်ကိုဝန်ခံတာပါ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ မလုပ်တတ်ပါ။ ယ္ခုပို့စ်အတွက်လည်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွာားသည့်အတွက် ဦးဇင်းကိုလည်း တောင်းပန်ပါတယ်။ashin ဦးဇင်းတို့လိုချင်တာက အဖြစ်မှန်ဟာ အသိဥာဏ်လေးနက်သူတို့အတွက် တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်းသေချာလေးသိစေချင်တာပါ တဦးတယောက် နစ်နာသွားစေတဲ့ အလုပ် အပြုအမူမျိုးကို ကိုယ်လုပ်ဖို့လည်း လက်မခံနိုင်ဘူး သူများလည်းမလုပ်စေချင်ပါဘူး အဲဒါလေးလိုချင်တာပါ
11:01 AM me: တကယ် အပြစ်တင်ရမယ်ဆို သတင်းပေးလာတဲ့ သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ ဘုန်းကြီးပါဘဲ
11:02 AM စေတနာ အရင်းခံပြီးရေးတဲ့
ဘုန်းကြီးလောကဆိုတော့ နားမလည်တော့ဘူး ဘုရား
ashin ဟုတ်ကဲ့သူတို့လုပ်ရပ်ကို အဲလိုမလုပ်စေချင်တာပါ
me: ဦးဇင်း ဒီနေ့ ရှင်းလင်းထားတဲ့ ပိုစ်မှာ ဦးဇင်းနဲ့ ပြောထားတာတွေ ပြန်လည်ကူးယူ တင်လို့ ရမလား
သူတို့ကို ဦးဇင်းနဲ့ ဖြေရှင်းထားကြောင်း သိစေချင်တယ်
11:13 AM ashin အီးမေလ်ကို မထဲ့ပါနှင့်တကာမ
11:14 AM me: အီးမေလ်း မထည့်ရင်
တပည့်တော်မ လုပ်ကြံရေးတယ် ဖြစ်လာဦးမယ်
ဦးဇင်းလည်း အမှန်တရား အတွက် လာပြောတာဘဲ
တပည့်တော်မလည်း အမှန်တရားကို ဘဲ တင်ချင်ပါတယ်
11:15 AM ashin အများအတွက်အဆင်ပြေမဲ့စကားတွေပဲသုံးစေချင်တယ် အခုက တကာမနဲ့ဦးဇင်း personal ချက်ပြောနေကြတာတွေမို့ပါ
11:18 AM me: နာလည်ပါတယ်
သို့သော် ဦးဇင်းမေလ်း မထည့်ရင် ခုလို ယုန်ထင်ကြောင်ထင် အလကားသတင်းလွင့်တယ် ထင်မှာလေ
ခု လက်ရှိ ဖြစ်ရပ်ဘဲ ကြည့်ပါ
ashin ကျောင်းမာနေပီး တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ ဦးဇင်းတပါးက ချင်းလင်းပြောတာလို့ ပြောရင်ဖြစ်ပါတယ် သတင်းတွေမှာ စကားခိုင်မာအောင် ဒီလိုပဲသုံးနေလေ့ရှိပါတယ်
11:19 AM me: တော်ကြာ လာအက်ပြီး ဘယ်ကိုယ်တော်လဲ ဘာလဲ ညာလဲ အဲလိုတွေ
11:21 AM ashin မေလ်ကို တအားကြီး ပျံ့သွားတာမကောင်းပါ ကိုယ်သိသူတွေဆို အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး အလွမ်းမြို့လေး။
Posted by အလွမ်းမြို့လေး at 04:09
Posted by Dr. Ashin Indaka at 7:33 PM
NLDဗဟိုကျောမတီ အစညျးအဝေးမှာ တိုငျကွားစာကိစ်စဆှေးနှေး
အနည်းဆုံးအခကြေးငွေနှုန်းအသစ် သတ်မှတ်နိုင်ရေး စစ်တမ်းကောက်ယူနေ
Ashinindaka သို့ လျှောက်ထားလွှာ
ရတနာ (၄) နိဂုံး
ဘုန်းကြီး၊ ငွေ၊ နိဗ္ဗာန်၊ ကား
ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ နောက်ဆက်တွဲ (ဃ)
ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ နောက်ဆက်တွဲ (ဂ)
တည်ဆောက် ၊ ဆောက်တည်
ရည်ရွယ်ချက် (၂) ခု